Madagasikara Manohana Ny Fanamelohana Ho Faty | rafozan-doza |
Published on 11/16,2007
Nanohana, araka ny fiheverany manokana, ny fanamelohana ho faty ny Minisitra ny fitsarana Malagasy, tao arinan'ny nanaovan'ny Firenena Mikambana drafitrasa hanaovana antso avo ny firenena hanajanona izany.
Andro maromaro tao arinan'ny nanamelohana ho faty olona 12, izay voaheloka ho namono olona sy nangana "rotaka" (fanoherana), no namoahany ity heviny manokana ity.
Ny nahatonga ity tantara ity moa dia noho ny vonoan'olona avy @ adi-tany izay nisy ny fanoheran'ny mponina teo an-toerana ny fanalana azy ireo t@ ireo tany ireo.
Ny mpanao gazety any an-toerana moa nilaza fa efa hatr@ fahaleovan-tena 1960 no tsy nisy ny famonoana (fanalana aina mivantana) intsony tany Madagasikara.
Nilaza t@ BBC moa ny minisitry ny Fitsarana Malagasy, Bakolalao Ramanandraibe fa heviny manokana no nolazainy momba ny fanamelohana ho faty io ary tsy tokony ho raisina toy ny firehin-kevitra officialy an'ny fanjakana Malagasy.
Nampiany moa izany fa tsy vonona ny hitsikera/hanome ny heviny momba ilay adin-tany, izay nahatonga ny fanamelohana ho faty ireo olona 12, nosamborina ny Alarobia lasa teo izy.
Ingahy Jonny Hogg, mpanao gazetin'ny BBC any Antananarivo, nilaza fa 92 olona no voarohirohy ao @ ity raharaha ity.
Ankoatry ireo olona voaheloka ho faty, ny sasany t@ izy ireo voafonja 5taona, ny sasany voaheloka hanao asa anterivozona, araka ny voalazany.
5 taona lasa izay, nisy mpandraharaha nividy ny tany manodidina an'Analavory, tanana iray 90km andrefan'ny renivohitra, mba hanaovany sehatra hiantsoana ny mpizahan-tany ary teo no niatombohan'ilay ady t@ fokonolona.
T@ volana Aogositra 2006 ary dia nisy polisy avy any andrenivohitra nalefa t@ io tanana io mba hanala ireo mponina teo @ ilay tany kinanjo nisy fifanoherana mafy izany.
Nitangorona ny fokonolona nanohitra ary nisy polisy 2, maty voatoraka t@ vato. Nisy olona 1, mponina teo antoerana ihany koa voatifitra ary maty teo.
Nilaza moa ireto fokonolona fa efa hatr@ razambeny ary nipetraka t@ io tany io.
Ny fitsarana moa nanameloka ny fokonolona, nankatoa ny hevitry ny mpitory fa hetsika mitory famonoana olona sy fanaovana "rokataka" no nataon'izy ireo.
ndlr: Dikan-teny Malalaka, nalaina tao @ Lahatsoratry ny BBC News-Front, anio Zoma 16 Novambra 2007.
Posted by simplex at 22:58 Hametraka hevitra (8) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Dago